Iyo Lysithea X tweak inotiratidza iyo iOS 11 mumhanzi mutambi interface | IPhone nhau
Iyo tweak Lysithea X inotiratidza chimiro chemumhanzi mutambi weIOS 11
Kusiya gakava rakakomberedza nyika ye jailbreak munguva dzichangopfuura uye bhizinesi rava revabiridzi, avo vanosarudza kutengesa kushandisa jailbreak kumakambani ekuchengetedza Panzvimbo pekuvashandisa kupaza kwejeri, vanogadzira tweaks vanoramba vachibheja nenzira iyi kuti vagadzirise mudziyo wedu neIOS 10. Nhasi tinotaura nezvetweak nyowani iyo inotibvumidza kunakidzwa neyakagadzirwa nyowani inopihwa nemumhanzi mutambi muIOS 11, ine zvakawanda yakawanda compact dhizaini pane iyo iripo parizvino kune vese vashandisi vanoshandisa iyo iOS 10 pane avo terminals.
iOS 11 inotivigira huwandu hukuru hwemabasa, mazhinji acho aesthetic, senge nyowani Control Center. Iko mukana wekurekodha chidzitiro chemidziyo yedu natively, gwaro scanner rakabatanidzwa muchirongwa cheManotsi, kubhadhara pakati pevashandisi veApple Pay uye iko kunyorera meseji uye zvimwe zvakawanda. iOS 11 inotipa nyowani mimhanzi inoridza interface inoratidzwa pane yekuvharira skrini, inowirirana mutambi kupfuura iyo yatinogona kuwana mune shanduro dzekare dzeIOS. Kutenda kuLysithea X tweak, tinogona kushandisa iyi nyowani compact player pane edu zvishandiso neIOS 10 uye jailbreak.
Sezvo isu tichiona mumufananidzo uri pamusoro, iyi tweak inoderedza saizi yemutambi kusvika padiki kutaura, asi zvakare inotipa isu sarudzo yatinogona kuwedzera saizi yayo nekukurumidza kuti tione zvimwe zvakawanda nezve rwiyo uye album irikutamba pa nguva iyoyo. Kuti tidaro, isu tinongofanirwa tinya kaviri pane mutambi uye saizi yacho ichawedzerwa kuratidza ruzivo rwese rwe rwiyo rwuri kurira parizvino.
Iyi tweak, kusiyana neruzhinji rwatinokuratidza, haiwanikwe kurodha mahara, sezvo iriInotengeswa pamadhora 0,99 uye inowanikwa pane BigBoss repo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Iyo tweak Lysithea X inotiratidza chimiro chemumhanzi mutambi weIOS 11
uye zvakanaka, ko jailbreak iripo here ye10.3.2?
Kudonha kutsva kwepanofungidzirwa kumashure kwepaneru kweiyo iPhone 8
Safari Plus inokutendera iwe kuti uwane zvakanakisa kubva kuSafari pane iOS